सगरमाथामा ४ वटा शव फेला ! – Shuva News
सगरमाथामा ४ वटा शव फेला !
Shuvanews १५ बैशाख २०७६, आईतवार April 28, 2019 527 Views
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा ४ वटा शव पनि भेटिएको छ । सगरमाथा सरसफाई अभियान अन्तरगत सगरमाथाको बेस क्याम्प पुगेको टोलीले सरसफाईका क्रममा ४ वटा शब फेला पारेको हो । बेसक्याम्प पुगेका सगरमाथा सफाई अभियानमा जुटेको टोलीले सफाईको क्रममा हालसम्म ४ वटा शव भेटिएको जानकारी गराएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
वैशाख १ गतेबाट सुरु गरिएको सो सरसफाई अभियान हाल सगरमाथाको बेस क्याम्पमा जारी रहेको छ । सरसफाइ अभियानमा नेपाल सरकार, खुम्बु पासाङ गाउँपालिका, नेपाली सेना, नेपाल पर्वतारोहण संघ, सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिति र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको संयुक्त टोली संलग्न रहेको छ ।
अभियान अन्तरगत हालसम्म ३ हजार केजी फोहोर संकलन गरिएको र त्यसमध्ये करिव १ हजार केजी फोहोर हेलिकप्टरमार्फत् काठमाडौं ल्याइएको सो टोलीले जानकारी दिएको छ । २ करोड ३२ लाख १६ हजार खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको सरसफाई अभियान ४५ दिनमा सकिने अनुमान गरिएको छ ।